गृहमन्त्रीको प्रशासन सुधार मार्गचित्रः विदेशमा प्रहरी सहचारी खटाउनेदेखि ट्राफिकको भत्ता घटाउनेसम्म
इलेक्सन वाच स्थानीय तह निर्वाचन- २०७४ (दोस्रो चरण)
कुन शिर्ष नेता कुन ठाउँबाट भोट हाल्दैछन् ? हेर्नुस् मतदान केन्द्रसहित
बुटवलमा भरतपुर प्रकरण दोहोरिने संकेत, मतदानमै लफडा होला कि मतगणनामा ?
रुकुममा कांग्रेसले माओवादी कार्यकर्ता कुट्यो, पाँच घाइते
भोट हाल्न जाँदा छाता या घुम बोक्न नविर्सनुस्, दिउँसोदेखि भारी बर्षा हुने सम्भावना
काठमाडौँ महानगरले साझालार्इ दियो पाँच करोड,साझाले १३ वटा नयाँ बस थप्ने
ग्लोबल गोर्खा समाज नेटवर्कको पहिलो अधिवेसन गोर्खामै गर्ने तयारी
फर्मुला इ रेसिङ्गमा महिन्द्राको एम३ इलेक्ट्रो रेस कार
ठमेलको एक होटलमा मृत भेटिइन् बंगलादेशी नागरिक
कतारलाई फेरि अर्को झट्का, के होला अव विश्वकप फुटबल
राजनीति चौतर्फी घेराबन्दीमा एमालेः बिरालो बन्छ कि मुसो ?
काठमाडौं, असार १३ । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो भएको साख जोगाउनैपर्ने राजनीतिक र नैतिक दबावमा छ, एमाले । तर, उसलाई उक्त दबावको सामना गर्न कम्तिको चूनौती छैन ।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा भन्दा पनि भयानक ढंगमा भएको चुनावी तालमेल नै एमालेका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।
कतिपय स्थानमा एमालेले पनि अरु दलसँग चुनावी तालमेल गरे पनि अधिकांश स्थानमा अरु सबै एक, एमाले एक भएर दोस्रो चरणको चुनावी मैदानमा छन् ।
मौन समयकाे पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले भने, ‘सरकार धेरै उत्ताउलो नहोउ’ झगडा गर्नुपर्ने त नरेन्द्र मोदीसँग हो, सीमा सुवेदीसँग होइन
नेपाल काठमाडौँ महानगरले साझालार्इ दियो पाँच करोड,साझाले १३ वटा नयाँ बस थप्ने
काठमाडौँ, असार १३ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पूरक सम्झौताअनुरुप पुनः पाँच करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
ठमेलको एक होटलमा मृत भेटिइन् बंगलादेशी नागरिकनिर्वाचनको अघिल्लो दिन प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै राजपाकाे यस्तो माग (विज्ञप्तीसहित)
काठमाडौँ महानगरमा अब फ्रि वाइफाइ, कहाँ–कहाँ छ यस्तो सुविधा ?रुकुममा कांग्रेसले माओवादी कार्यकर्ता कुट्यो, पाँच घाइतेकाठमाडौँमा फेरि स्वाइन फ्लू भेटियो , जान्नुहोस् यसको लक्षण, बच्ने र सावधानीका उपायहरुअरु कागजात देखाएर पनि भोट हाल्न सकिनेछ : निर्वाचन आयोग७ नम्बर प्रदेशका सबै मतदान केन्द्रमा बम डिस्पोजल टोली सहितको सुरक्षा व्यवस्था
खेल कतारलाई फेरि अर्को झट्का, के होला अव विश्वकप फुटबल
एजेन्सी । सात छिमेकी मुलुकहरुको नाकावन्दीबाट आक्रान्त कतारलाई फेरि अर्को झट्का लागेको छ । सन् २०२२ मा हुने विश्वकप फुटबलको लागि छानिएको मुलुक कतारलाईे यस खेलको लागि आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको छ ।
‘गोल सेलिब्रेशन’ गरे लगत्तै रातो कार्ड खाए यी खेलाडीहरुले (भिडियो)
एजेन्सी–फुटबल खेलका फ्यानहरु विश्वभर रहेका छन् । फुटबल हेरिरहँदा फ्यान त उत्तेजित हुन्छन् भने गोल गरेका खेलाडीहरु त झनै उत्तेजित हुने गर्छन् ।
आयोजक टोली रसिया आउट
एजेन्सी–रसियामा जारी कन्फेडेरेशन कपमा रसिया आउट भएको छ । शनिबार राति भएको खेलमा मेक्सिकोसँग २–१ गोलले पराजित भएपछि रसिया आउट भएको हो ।
अर्थ अनलाइन मोबाइल एक्स्पो गर्दै दराज केमु, ५० प्रतिशतसम्म छुटमा मोबाइल किन्न पाइने
काठमाडौं, असार १३ । दराज केमु प्रालिले आफ्नो अनलाइन प्लेटफर्ममा मोबाइल सप्ताह २०१७ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ती गर्दै ग्लोबल आइएमई बैंक, चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ८ करोड पुग्ने
काठमाडौं, असार ९ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको विशेष साधारण सभाले रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ती गर्ने सम्बन्धि विषेश प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
चन्द्रागिरि केवलकारको टेलिभिजन विज्ञापन सार्वजनिक
काठमाडौं, असार ७ । चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि टेलिभिजन विज्ञापन सामाग्री सार्वजनिक गरेको छ ।
कतार एयरवेजले पायो विश्वकै उत्कृष्ट एयरलाइन्सको अवार्ड
काठमाडौं । पेरिस एयर शोमा आयोजित बहुप्रतिष्ठित २०१७ स्काइट्र्याक्स वल्र्ड एयरलाइन अवार्डमा कतार एयरवेजलाई एयरलाइन अफ द इयर उपाधीद्वारा सम्मानित गरिएको छ ।
अन्तर्वार्ता सबैसँग मिलेर समृद्ध बाह्रविसे बनाउँछु
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो गढका रुपमा लिएको सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसे नगरपालिकामा यसपालि नेकपा एमालेका उम्मेदवार निमफुञ्जो शेर्पाले जित हात पारे । अनेक चुनौतीका बीच बाह्रविसे नगरको मेयर बन्न सफल शेर्पा सिन्धुपाल्चोकको राजनीतिमा नौलो नाम होइन । उनै शेर्पासँग पत्रकार नेत्र पौडेलले नगर विकासको योजना, चुनौती र सम्भावनाबारे गर्नुभएको कुराकानीः
म थारुको मात्रै उम्मेदवार होइन, सम्पूर्ण घोराहीबासीको हितमा काम गर्नेछुएमालेकै तर्फबाट २०५४ सालमा रामपुर गाविसको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका गाउँठाउँको विकासका लागि अनगिन्ति कामहरु गरेका नरुलाल चौधरीको नेतृत्वमा रामपुरका विकट ठाउँहरुमा समेत दर्जनौ स्कूल, खानपानी, सिचाई, अस्पतालहरु निर्माण भएका छन् । रामपुरलाई कृषिको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएका चौधरीले बाटोघाटो निर्माणमा पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रस्तुत छ चौधरीसंग पत्रकार प्रेम रम्जाले गरेको कुराकानीः
यस्तै भए दोस्रो चरणको चुनाव हुँदैननेपालको शान्ति प्रक्रिया र द्धन्द्ध ब्यवस्थापनको लागि सफल मध्यस्तकर्ताको रुपमा सक्रिय बनेका बुद्धिजिवी हुन् डा. केबी रोकाया । माओवादी युद्ध र त्यसपछिको लामो अवधिसम्म उनले नेपाली आन्दोलनरत पक्ष र विदेशी नियोगसँग राम्रो समन्वय गरे । मानवअधिकार आयोगको सदस्य हुँदै नेपाल बौद्धिक मञ्चका अध्यक्ष डा. रोकायासँग नेपालीपत्रका लागि रमन पौडेलले गरेको कुराकानीः
more news प्रेम र यौन पहिलो यौन सम्बन्धका बारेमा के सोच्छन महिला ?
स्त्रीले आफ्नो जीवनमा केही न केही फरक र उत्ताउलो खालको यौन अनुभव गर्न चाहने देखाएको छ । मौका पाउँदा उनीहरुले अनौठो अनौठो यौनिक अभ्यासको परीक्षण समेत गर्न मन पराउँने तथ्य उक्त अध्ययनबाट देखिएको हो ।
कसरी बन्छ कन्डम ? भिडियोमा हेर्नुहोस्धेरैलाई चासोको विषय हुन्छ, कसरी बन्छ कन्डमरु भिडियोमा हेर्नुहोस् कन्डम बन्ने प्रक्रिया।
कण्डमबारे यी कुराहरु तपाईलाई थाहा नहुनसक्छतपाईलाई मन पर्छ वा पर्दैन तर कण्डम एक आवश्यकता हो । यो एक त्यस्तो चिज हो जसलाई तपाईले प्रत्येक चोटि यौनसम्पर्क गर्दा लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
more news बिचार यी तीन कारणले फेरि पहिलो पार्टी बन्दैछ एमाले- विष्णु रिजाल मेरी आमालाई राख्ने बृद्धाश्रम बनाउन किन चन्दा दिने ?- रवि अर्याल संघीयताको ह्याङओभरः देशको पहिचान गुमाएर जातीय पहिचान किन ?- विनाेद नेपाल
more news कला र मनोरञ्जन यी बलिउड स्टारहरुको असली नाम यस्तो रहेछ बलिउड–बलिउडमा आउनुपुर्व यी बलिउड कलाकारहरुको नाम अर्कै रहेको थियो । बलिउडमा आएपछि भने उनीहरुले नाम फेरेका थिए । बलिउडका चर्चित कमेडियन जोनी लिभरको असली नाम जोनी प्रकाशा हो । बलिउडमा आफ्नो करिअर जम्दै गएपछि उनले नाम गरिवर्तन गरेका थिए ।
यी हुन् बलिउडका हिट पिता फ्लप छोराबलिउड–बलिउड कुनै समय हिट रहेका कलाकारहरुका सन्तानहरु पनि फिल्मी लाइनमा रहेका छन् ।
प्रस्ताव त आइरहन्छन् तर, कसैले चोट बुझोस् जस्तो लाग्छ
चार वर्षसँगै बसेपछि मेरो वैवाहिक सम्बन्ध टुट्यो । त्यसपछि सम्बन्ध अघि बढ्न सकेन । जब म सम्बन्ध बिच्छेदका लागी अदालत पुगें । तब मलाई एकदमै लाज लाग्यो ।
more news खेल कतारलाई फेरि अर्को झट्का, के होला अव विश्वकप फुटबल
के तपाईलाई दुवईबारे यी रोचक कुराहरु थाहा छ ? एजेन्सी–बितेका केही वर्षमा एसियाका केही देशहरुले उल्लेख्य मात्रामा विकास गरेका छन् । केही देशहरुले विकास नै गर्न नसकिने ठाउँमा पनि अकल्पनिय विकास गरेर विश्वभरलाई देखाइदिन समेत सफल भएका छन् । यस्तै एउटा अजबगजबको विकास गरेर देखाउनेमा पर्छ दुबई ।
more news अन्तर्राष्ट्रिय लिउको विषयमा अनावश्यक टिप्पणी नगर्न चीनको आग्रह बेइजिङ, १३ असार । चिनियाँ नागरिक लिउ जियाबाओका विषयमा अनावश्यक र गैरजिम्मेवार टिप्पणी नगर्न चीनले आग्रह गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लु छाङले सो आग्रह गरेका हुन् । असद सिरियामा घातक हमलाको तयारीमा– अमेरिकावासिङटन, १३ असार । सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल असद सिरियामा घातक रासायनिक हमलाको तयारीमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले जनाएको छ ।
more news साहित्य ‘रोल्पा सुइना’ मरणासन्न छाडिदिने प्रचण्ड–बाबुरामलाई एकचोटी ‘फ्लावर्स अफ वार’ देखाउनुपर्ने थियो !- सरोनर रोगी लाहुरेलाई पारिजातको दर्दनाक प्रेमपत्र- पारिजात असार नोस्टाल्जियाः जब जेठ सिद्धिएर असार लाग्छ- रमन पौडेल
more news ब्लग जुसर, विज्ञापन र फिटनेस
- संजित श्रेष्ठफलमा आशा नराख तर कर्म नछोड
- more blogs प्रबिधि फर्मुला इ रेसिङ्गमा महिन्द्राको एम३ इलेक्ट्रो रेस कारयस्ताे छ नेपाल टेलिकमकाे 'मेगा अफर', डाटा प्याक झनै सस्ताेअबदेखि कर नतिर्ने व्यबसायीको फेसबुक खाता बन्द गरिने
दूरसञ्चार सुविधा नपुगेको बाग्लुङको तमानखोलामा नेपाल टेलिकमले सुरु गर्याे सेवाकाठमाडौं, असार ११ । नेपाल टेलिकमले बाग्लुङ जिल्लाको उत्तर पश्चिम भेगकको विकट तमानखोलामा बिटिएस टावर स्थापना गरी जिएसएस मोबाईल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
प्रेम र यौन पहिलो यौन सम्बन्धका बारेमा के सोच्छन महिला ?
more news धेरै पढिएका खबरतिब्र दबावपछि साइजमा आइन भारतीय युवती सीमा (सीमाको तेस्रो भिडियोसहित)दाेस्राे चरणकाे चुनावमा गठबन्धनका जसले जिते पनि कांग्रेसमै गणना हुनेझगडा गर्नुपर्ने त नरेन्द्र मोदीसँग हो, सीमा सुवेदीसँग होइननाकाबन्दी अन्त्य गर्न साउदी अरबले पेश गर्यो १३ बुँदे सर्त, अब कतार के गर्छ ? दार्जिलिङ आन्दोलनबारे दीपकराजको गिरिको यस्तो स्ट्याटससाउदी अरबको १३ बुँदे सर्तबारे यस्तो प्रतिक्रिया दियो कतारलेभारतका लागि नेपाली राजदूत उपाध्यायले किन भेटे योगीलाई ? कुटनीतिक क्षमतामाथि नै आशंकाविदेश गएर करिअर सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ ? यी १५ देशमा जानुहोस्
English Namaste….!!! We Are Heading To Wembley Again…..!!!!Once again the Nepalese music is taking center stage here in the UK, it would be hard to believe that few of the Nepalese band would be performing in the world renowned Wembley Arena again,
Trade and Investment between UK and NepalKremlin says US election hacking reports 'unfounded'Encouraging NRNs Contribution to National Economy is Subject to Investment Friendly Environment and Changes in Conventional Laws and Policies
भिडियो “के म तिम्रो होईन र”
यी हुन् सामाजिक सञ्जालमा तहल्का मच्चाइरहेका ‘लिटल ब्रुस लि’ (भिडियोसहित)एजेन्सी–ब्रुस लिलाई नचिन्ने कमै होलान् । कुनै समयका विश्व चर्चित फाइटर तथा अभिनेता ब्रुस लिको देवाशन भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ ।
यी हुन् सबैभन्दा धेरै भाषा बाेलिने १० देशकसरी बने यी व्यक्ति ८०० बच्चाका पिता ?